गोन्जालोलाई सहिद घोषणा गर्दै महासचिव विप्लवले भने– साम्यवादको महान् झन्डा फहराइरहनेछ ! – जन बिहानी राष्ट्रिय मासिक
September 12, 2021 September 12, 2021 जन बिहानीLeaveaComment on गोन्जालोलाई सहिद घोषणा गर्दै महासचिव विप्लवले भने– साम्यवादको महान् झन्डा फहराइरहनेछ !
काठमाडौँ, भदाै २७ गते । नेकपाका महासचिव विप्लवले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता एवम् पेरू कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष अभिमायल गुज्मान गोन्जालोलाई महान् सहिद घोषणा गर्दै प्रतिक्रियावादी शासकहरूले क्रान्तिकारी योद्धा गोन्जालोको हत्या गरे पनि मानव जातिको मुक्ति नभएसम्म गोन्जालोले उठाएको साम्यवादको महान् झन्डा फहराइरहने बताएका छन् । आइतबार श्रद्धाञ्जली वक्तव्य जारी गर्दै महासचिव विप्लवले भनेका छन्, ‘कमरेड गोन्जालो फासिस्ट पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दागर्दै सहिद हुनुभएको छ । सर्वहारा वर्गका इमानदार नेताको निधनले हामी विश्वभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई दुःखी बनाए पनि उहाँको वैज्ञानिक समाजवाद– साम्यवादप्रतिको प्रतिबद्धता र दृढताले गौरवान्वित बनाएको छ ।’
क्रान्तिप्रति दृढता व्यक्त गर्दै वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘हामी क्रान्तिकारीहरूले उहाँको गिरफ्तारीका विरुद्ध विश्वभरि प्रदर्शन गर्यौँ । उहाँको रिहाइका लागि आवाज बुलन्द गर्यौँ । तीस वर्षको लामो जेलजीवन, पाको उमेर, अनेकौँ स्वास्थ्य समस्याका कारण कमरेड गोन्जालोको ८६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । प्रतिक्रियावादी, पुँजीवादी, साम्राज्यवादी, दलाल पुँजीवादीहरूले अनेकौँ प्रचार गर्न सक्छन् तर हामी क्रान्तिकारीलाई राम्रो थाहा छ– क्रान्ति गौरव र चुनौतीले भरिएको यात्रा हो । मान्छेको भौतिक जीवन उसको विचारधारात्मक एवम् राजनीतिक आदर्शभन्दा गौण कुरा हो । दुनियाँलाई बदल्न चाहने अगुवाले भौतिक जीवन र भौतिक सुखलाई महान् आदर्शभन्दा माथि राख्नु हुँदैन । जसले सारा चुनौतीहरूलाई गौरवका साथ सामना गर्ने साहस गर्छ, आजको गएगुज्रेको दलाल पुँजीवाद–पुँजीवादलाई मिल्काउन सक्छ । अन्त्यमा हामी नेपाली क्रान्तिकारीहरूले आजको जटिल एवम् सङ्कटपूर्ण साथै सम्भावनायुक्त राष्ट्रिय राजनीतिमा कमरेड गोन्जालोबाट शिक्षा र आदर्श सिक्दै यहाँको दलाल पुँजीवादी सत्ता मिल्काउन र यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ– नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छन् । हामी निर्भीकतापूर्वक बढेमा नेपाली जनताको विजयलाई कसैले रोक्न सक्नेछ्र्रैन । महान् नेता एवम् योद्धा कमरेड गोन्जालो, यो धर्तीमा मानव जाति रहेसम्म तपाईंको विचार र आदर्श बाँचिरहनेछ । तपाईंको भौतिक जीवन नरहे पनि तपाईंले उठाएको साम्यवादको महान् झन्डा फहराइरहनेछ !’